आफ्नो कर्तुत सार्वजनिक गर्ने अर्थ सरोकारका पत्रकारलाई 'ठेगान लगाउने' भन्दै आइक्यानले मिच्यो प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार !
ARCHIVE, POWER NEWS » आफ्नो कर्तुत सार्वजनिक गर्ने अर्थ सरोकारका पत्रकारलाई 'ठेगान लगाउने' भन्दै आइक्यानले मिच्यो प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार !
काठमाडौँ - आफ्ना कर्तुतहरु सार्वजनिक गर्ने सिए सरोकार डटकम र अर्थ सरोकार डटकमका पत्रकारलाई विद्यार्थीका हैसियतले कारवाही गर्ने भन्दै आइक्यानका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश लम्सालले जवर्जस्ती प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार हनन हुनेगरी कार्यविधि पास गरेको खुलासा भएको छ ।
विद्यार्थी आचारसंहिताका नाममा समाचार लेखेकै निहुँमा आइक्यानले यसअघि पनि पत्रकारलाई सतर्क गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका काम गरेको थियो । अन्तत विद्यार्थी आचारसंहिताका नाममा पत्रकारलाई कारवाही नै गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको फेला परेको छ ।
आइक्यानमा विद्यार्थी रहेका र सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका तत्कालीन समयमा दुइ जना मात्र पत्रकार थिए । तत्कालीन समयमा कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध एक पत्रकार र सिए सरोकार डटकममा आवध्हा एक पत्रकार आइक्यानका विद्यार्थी थिए ।
यसअघि नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) बाट प्रेस काउन्सिलको अडिट ब्यूरो अफ सर्कुलेसन समितिमा सदस्य भएर समेत तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश लम्साल प्रेस काउन्सिलमा पुगेका थिए ।